Xildhibaanadii keenay mooshinka madaxweynaha ka dhanka ahaa oo wali mooqifkoodii ku dhagan – STAR FM SOMALIA
Iyadoo maanta oo Sabti ah Guddoonka Baarlamaanka Somaliya uu iclaamiyay in la isugu imaanaayo wada hadalka xal u helida Mooshinka laga keenay Madaxweynaha Somaliya Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa Xildhibaanada Mooshin wadayaasha ah weli waxa ay ku adkeysanayaan inaysan ka qaybgalayn kulankaasi.
Xildhibaan Axmed Aabi Aadan oo ka tirsan Baarlamaanka Somaliya ayaa sheegay in fekerkii ay ka qabeen arimaha wada hadalka weli sidooda uu yahay, islamarkaana aysan dooneyn inay ka qaybgalaan wada xaajoodkaasi.
Wuxuu sheegay Xildhibaan Axmed Aabi Aadan, wax laga wada hadlaa meesha inaysanba oolin, isaga oo taasi sabab uga dhigay in Guddoonka Baarlamaanka Somaliya uu horay Mooshinka go’aan uga gaaray, markii Guddoomiyaha uu sheegay in la soo afjaray Muranka Mooshinka.
Xildhibaan Axmed Aabi Aadan, wuxuu tilmaamay Guddoomiyaha Baarlamaanka Somaliya in uu soo saaray qoraalo badan oo iska soo horjeeda oo aanan ku habooneyn habkii uu kaga hadlay arimaha Mooshinka.
Xubnaha Mooshin wadayaasha ah waxa ay si aad ah kaga cadheysan yihiin Qoraalkii Guddoomiyaha Baarlamaanka Somaliya uu horay u soo saaray ee uu ku sheegay in arimaha Mooshinka la soo afjaray, la isugu yimaadana wada hadal dhici doono 7-da October oo aan soo dhaafnay, iyadoo kulankaasi uu baaqday.
Waxa uu sheegayaa Xildhibaan Aabi Mooshinka in go’aan looga gaari karo labo arimood oo kaliya, kuwaasi oo kala ah in maxkamad la horgeeyo Mooshinka oo go’aan ay ka gaarto maxkamada iyo in Cod loo qaado oo dhinac u dhaco Mooshinkaasi.
Xildhibaanada Mooshinka ka keenay Madaxweynaha Somaliya Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa horay u diiday inay tagaan kulankii lagu madalsanaa 7-Bishan in uu qabsoomo.
Shirkii golaha wasiirada soomaaliya oo maanta lagu ansaxiyey sharciga naafada qaranka(Daawo Sawirada)